Ethiopia oo Ciidamo Badan Geeysay Xadka Sudan – WARSOOR
Ethiopia oo Ciidamo Badan Geeysay Xadka Sudan
ITOOBIYA – (WARSOOR) – Ra’iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed ayaa sheegay in ay ka fiirsanayaan dhowr talaabo ay qaadi doonaan hadii dowladda Sudan ay sii wado ciidamadeedi ay kusoo kordhinayso dhulka beeraha Fagasha oo laga saaray maleeshiyaad Ethiopian ah.
Abiy ayaa shaaca ka qaaday in wax walba ay doonayaan in lagu dhameeyo wada hadal Diplomasiyadeed waxaana uu sheegay in uu ka dhamaan rabo samirka hadii sida ay hadda wax ku socdaan ay sii ahaadaan.
Dowladda Sudan ayaa sheegtay in Ethiopia ay ugu baaqayso inay kala laabato ciidamada badan ay soo dhoobtay dhinaca Soodinta taa oo ay ku tilmaamtay in ay tahay daandaansi dagaal.
Wasiirka Difaaca Sudan ayaa sheegay in dalkiisa uusan qorshaha ugu jirin dagaal ay dowladda dariska la ah ay lagasho ayna ciidamadeedi dib ula soo laaban doonto marka la xaqiijiyo amaanka beerahii 20ka sano ka maqnaa dowladda Sudan.
AFRICOM oo Soomaaliya ka caawinaysa la dagaalanka xagjirka
Maxkamdda gobolka Togdheer oo burburisay 515 liitir oo Khamri ah
Xasan Sheekh oo ku Guuleystay Doorashada Madaxweynaha
MUQDISHO – (WARSOOR) – Xasan Sheekh ayaa ku guuleystay doorashada madaxweynaha isagoo wareeggii seddaxaad uguna dambeeyay uga adkaaday madaxweynaha xilka haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xasan Sheekh ayaa helay 214 cod…
Madaxweyne Farmaajo oo xilka ku wareejinaya Madaxweynihii xilka ku wareejiyay shan sano ka hor
Codeynta wareeggii ugu dambeeyay oo socota
Afar Musharax oo U soo Gudbay Wareega 2aad ee Doorashada Soomaaliya
Madaxweyne Farmaajo oo ubax dhigay Taalada SYL
MUQDISHO – (WARSOOR) – Waxaa soo gabagaboobay wareegii saddexaad ee doorashada Madaxweynaha Soomaaliya oo ay ku tartamayeen Labada Musharax ee kala ah Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Labada…
Copyright © 2022 WARSOOR